Tuchel Oo Gaadhay Finalka Sedaxaad Wax Ka Yar Hal Sano Oo Uu Ahaa Tababaraha Chelsea
HomeWararka CiyaarahaTuchel oo gaadhay finalka sedaxaad wax ka yar hal sano oo uu ahaa tababaraha Chelsea
January 13, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa aad ugu farxay inuu gaaro final kale waqti yar oo uu joogay kooxda.
Macallinka reer Jarmal ayaa Blues la joogay muddo sannad ah, waxaana uu horay u gaaray FA Cup, Champions League, iyo haatan finalka Carabao Cup.
Blues ayaa iska xaadirisay finalka Carabao Cup kadib markii ay lugtii labaad 1-0 ku garaacday Tottenham, waxayna lugtii hore 2-0 ku soo badisay.
“Waxay dareemeysaa wanaag,” Tuchel ayaa yiri isagoo ka hadlay dareenka ah in la gaaro final kale, sida laga soo xigtay website-ka kooxda.
“Taasi waxay ahayd bartilmaameedka, marka aad gaarto semi-finalka qof walba wuxuu rabaa inuu gaaro finalka, aad ayaan u faraxsanahay, Wembley waa sugayaa, tani waa meesha aad rabto inaad noqoto ciyaaryahan kubada cagta ah iyo tababar.
“Caawa waxaan ku bilownay si wanaagsan, waxaan abuurnay fursado, waxaan maamulnay, markii aan gool dhalinay waxaan helnay kalsooni dheeri ah iyo 30 ama 35 daqiiqo oo aad u wanaagsan, waxaan luminay xoogaa xakameyn ah, .